Shiinaha shiishka Seal liner warshad iyo alaab | 名 / 公司 名
Xiridda Sent Sent
Shaabadda la soo saaray waxay ka sameysan tahay filim neef qaadasho leh iyo shaabad kuleylinta kuleylka (HIS) iyada oo loo marayo ultrasonic ama alxanka dhalaalida kulul, kaas oo si buuxda u gaara natiijada "neefsasho iyo daadasho la'aan". Shaabadda fiiqan waxay leedahay naqshad fudud, hawo hawo aad u fiican iyo iska caabin fiican oo ku aaddan astaamaha. Badeecadan ayaa loo sameeyay inay ka hortagto in weelka buuxinta (dhalada) la gariiriyo ama la dhigo heerkullo kala duwan si loo soo saaro gaas ka dib markii la buuxiyo dareere gaar ah, taas oo keenaysa in weelku xumaado ama daboolka dhalada dillaaco.
Khadadka hawada gashan ayaa ah waxqabadka ugu fiican ee hawada ee warshadaha, fursado badan oo hawo-qaadis ah ayaa fuliya baahiyaha waxqabadka kala duwan. Waxaa lagu bixiyaa hal xabbo oo xumbada ah ama laba shey ah oo ku dhegan saxarka.
Safafka hawada loo maro ayaa ku habboon PET, PVC, PS, PP, PE bottles dhalooyinka caagga ah iyo dhalooyinka quraaradaha, waxaana inta badan loo isticmaalaa cuntooyinka, waxyaabaha la isku qurxiyo, dawooyinka, sunta cayayaanka, kiimikooyinka, baakadaha alaabada badeecooyinka.
Wax ceeriin: Kartoon + Aluminium Aluminium + Filim caag ah
Dhumucdiisuna waxay Standard: 0.2-1.2mm
Xuubka hawo-mareenka ah ee hawada u siman oo ka hortagaya konteynarrada inay qarxaan, dhacaan ama daadadaan.
Naqshadeynta naqshad-saxaafadeed oo khaas ah ayaa si fudud isugu xirta iyada oo loo marayo buug ama qalab rakibid ah.
Tiro ballaaran oo ah cabbirka hawo-qaadashada iyo qaybaha u diyaarka ah in la isticmaalo ee hagaajiya xirmada iyada oo aan dib-loo-qaabeyn.
1. Neefsasho iyo daadasho la'aan
2. Aad u fududahay in la furo
Hore: Safka Xumbo
Xiga: 3-Ply xumbo liner
3-Ply xumbo liner
Laba-shey oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh "...